Ny vahoaka no andrianina, ka tsy atao tompon-trano mihono. Ho porofon’ny tarigetra, ny fitandroana ny mangarahara. Maromaro ireo raharaham-pitsarana voasokajy ho mafampana. Anisany ihany ny tsy fahitana ireo voafonja miisa 22 (tarehimarika ofisialy hatreto anaty fanadihadiana mandeha) tao amin’ny Fonjan’i Miandrivazo, ny fikasana hanondrana vato sarobidy ka tratra, ny fandosiran’olona vitsivitsy any ivelany nefa manana raharaham-pitsarana eto Madagasikara. Eo koa ny momba ny fampiasana ireo tambazotran-tserasera tsy am-piheverana ka lasa mivaona. Ezaka mandroso ny fanadiovana tanteraka sy fanatsarana ny asam-pitsarana.
Maro ireo fanontaniana nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety androany Alatsinainy 22 Novambra 2021 teto Faravohitra. Nitondra valiny tamim-pahitsiana ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana. « Tsy maintsy hampahafantarina ny vahoaka ny marina rehetra momba ireo. Mandala ny mangarahara, ary tsy hanaiky velively izay tsy fanarahan-dalàna amin’ny endriny rehetra ny tenako. Tsy maintsy hajaina kosa ny lalàna mifehy ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana. Tahaka izany koa ny fanajana ny fahaleovantenan’ny Fitsarana » hoy Atoa IMBIKI Herilaza nanoloana ireo mpanao gazety, sy ireo mpiara-miasa, tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Hentitra ny sazy miandry ireo za-dratsy.
Atolotra tsy misy mipika ny fanazavana nentin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Ilaina tanteraka ny fanohizana ny fitandremana. Mbola eo tokoa ny loza, dia ny valanaretina Covid-19. Tarigetra ny fandraisana anjaran’ny Ministeran’ny Fitsarana amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nisy ny fanentanana natao ho an’ny mpiasa rehetra tsy ankanavaka androany Alatsinainy 22 Novambra 2021, teto Faravohitra.
Nanomboka ny fanentanana ny Lehiben’ny Sampandraharaha misahana ny Fitsaboana sy ny Sosialy eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Tokony hatao tokoa ny vaksiny hoy izy. Toy izany koa ny fanajana ireo fepetra fiarovana rehetra. Nanamafy izany ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Tahaka izao ny fanentanana nataon’i Dokotera RAKOTOMALALA Herisoa Emmanuel. Arahin’ny lahateny nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.